Vonona hiara-hiasa amin’ny Antenimierandoholona ny PSI Madagascar
Tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny Filohan’ny vaomiera sosialy, koltoraly ary serasera eo anivon’ny Antenimierandoholona RAKOTOZAFY Jean Martin ny talen’ny serasera avy amin’ny Psi Madagasikara (Population Service International – Madagascar) Rtoa Nathalie RANDRIAMANGA , ny talata 19 martsa 2019 teto amin’ny Lapan’ny Antenimierandoholona Anosy. Nanotrona ny Loholona RAKOTOZAFY Jean Martin moa ny Senatera RAMPARISON Luc sy RANDRIAMALALARISON François Xavier izay samy mpitsabo.
Nifantoka tamin’ny fangatahana fiaraha-miasa sy fampahafantarana ny tetik’asa vaovao IMPACT izay ho vatsian’ny USAID , ny lahadiniky ny roa tonta. Aharitra dimy taona io tetik’ asa io ary hanomboka ny faha 12 Aprily 2019 izao izany. Nambaran’ity talen ‘ny PSI fa ity tetik’ asa ity dia miompana tanteraka amin’ny resaka fahasalaman’ny reny sy ny zaza, ady amin’ny tazo moka ary amin’ny fanabeazana aizana. Ny tanjon’ny tetik’asa dia ny mba ahazoan’ny vahoaka Malagasy fanafody araka ny tokony ho izy.
Nohararaotin’ny Loholona Rakotozafy Jean Martin moa ny fihaonana nanazavany ny andraikitry ny Antenimierandoholona. Ary amin’ny maha-mpiahy ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny Andrim-panjakana dia nanoro hevitra ny tenany ny mba hisian’ny fiaraha-miasan’ny PSI Madagasikara amin’ireo Kaominina. Na ny loholona RAMPARISON Luc na ny loholona RANDRIAMALALARISON François izay samy mitsabo moa dia samy nanome toro-hevitra ny PSI mba ampahomby ny tetik’asa. Firariana hoy ny Senatera RAMPARISON Luc raha mba misy tetik’asa ho an’ny zokiolona ataon’ny PSI-Madagasikara.
Nambaran’ ny talen’ny sampandrarahan’ny serasera eo anivon’ny PSI moa fa any amin’ny distrika sy Kaominina any amin’ny faritra amorontsiraka no hifantohana sy hampiarana ny tetik’asa ka ireo fanafody dia aparitaka manerana ny fivarotam-panafody ambogadiny any amin’ny distrika (PHA GE DIS) sy fivarotam-panafody eny anivon’ny Kaominina (Pha Ge Com).
Vonona ny hiara-hiasa amin’ny PSI ihany koa moa ny Antenimierandoholona araka ny nambaran’ny Filohan’ny vaomiera sosialy , koltoraly ary serasera RAKOTOZAFY Jean Martin rehefa tonga ny fotoana ampiharana ny tetik’asa.